Haweenka dhalinyaradda ah oo wel wel ka qaba in habeenkii ay banaanka u baxaan | Somaliska
Haweenka dhalinyaradda ah oo wel wel ka qaba in habeenkii ay banaanka u baxaan
Gabadhaha dhalinyaradda ah ee dalka Iswiidhan ayaa ah kuwa ugu badan ee wel wel ka qaba in habeenkii ay dibadda u baxaan, sababo la xirriira casbi ay ka qabaan in la dhibaateeyo.
Gabdhahan oo da’doodu ka yar tahay labaatan jir ayaa sheegay ineey ka baqayaan in la soo daba kaco lana kufsado. “Waa arrin laga xumaado in aadan si xor ah aadan bulshada ugu dhex socon karin adigoo dameeraya wel wel” ayey tiri Isabelle Rosdahl oo ah 18 jir u warameeysay taleefanka Iswiidhan. Cabsida ay haweenka da’da yari ayaa mid salka ku heeysa kufsi iyo jir di loo geeysto dumarka siiba kuwa dhalinyarda ah kolkii ay ka yimadaan dibadda oo ay guryahooda u socdaan, ama ay raacayaan gaadiidka. Sadex ka mid ah haweenka da’da yar ayaa dareema cabsi habeenkii ah, halka qaar kalena ay ka baqayaan daba kac iyo kufsi loo geeysto marka ay tagaan goobaha lugu caweeyo.